ပါးချတဲ့ဂျပန်ကို ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးပြီး Black List သွင်းလိုက်သည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ပါးချတဲ့ဂျပန်ကို ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးပြီး Black List သွင်းလိုက်သည်
ပါးချတဲ့ဂျပန်ကို ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးပြီး Black List သွင်းလိုက်သည်
Posted by kanjosan on Feb 10, 2012 in Myanma News, News | 25 comments
ဟိုတစ်လောက ဟိုတယ်တစ်ခုမှာ ပြည့်တန်ဆာကို ဟိုတယ်ထဲ မခေါ်ရလို့ စိတ်ဆိုးပြီး ဂျပန်က ဟိုတယ်ဝန်ထမ်း အမျိုးသမီးကို ပါးချလိုက်တဲ့သတင်း တော်တော်လေးပြန့်နေပါတယ်…
ဒီကိစ ဖြစ်ပြီး ပါးချလိုက်တဲ့ ဂျပန်က သူ့သံရုံးကနေတစ်ဆင့် ဟိုတယ်ကို တရားစွဲတယ်လို့တောင် ကြားပါတယ်…
ပါးချခံရတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီး ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းကိုတောင် သူတို့ဘက်က စကားပြန်တွေ ရဲအရာရှိတတွေခေါ်လာပြီး တရားလိုသဘော စစ်ဆေးမေးမြန်းတာတွေ လုပ်တယ်လို့ ကြားပါတယ်…
မိန်းခလေး တစ်ယောက်ရဲ့ ကာအိနြေင်္အဇော်ကား ခံရတဲ့ ဖြစ်ရပ်မို့ တရားပြန်စွဲမယ်ဆိုတော့ ရဲကသက်သေအထောက်အထားပါလား… ဆေးစာပါလားမေးမြန်းလို့ ရန်ကုန်ဆေးရုံးကြီးမှာ ဆေးစာသွားယူရပါတယ်…
ဒီနေ့ကြားရတဲ့ သတင်းအရ ရဲချုပ်က ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးဖို့ အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေးကောင်စီကို တင်ပြရာ ကာလုံကဘောတူတဲ့အတွက် ပြစ်ဒဏ် သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်…
ကိုယု့်နိုင်ငံသားကို စော်ကားတဲ့ ဘယ်နိုင်ငံသားကိုမှ ငဲညှာပြီး ခွင့်မလွှတ်သင့်ပါဘူး.. ထိုက်သင့်တဲ့ ဥပဒေများ ထုပ်ပြန်ပြီး နိုင်ငံသားတိုင်းကို ကာကွယ်သင့်ပါတယ်…
ဟိုတစ်နှစ်လောက်ကလည်း အာဖရိက လူမည်းအမျိုးသမီးက လှည်းတန်းမှာ ဈေးသည်ကို ပါးရိုက်ပြီး ရိုင်းပြစော်ကားတာ ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်.. ခက်တာက ဒီနိုင်ငံမှာ ဒီလို ဥပဒေမဲ့ လုပ်တဲ့နိုင်ငံခြားသားကို နီးစပ်ရာ ရဲစခန်းကတောင် ဘာမှမလုပ်ရဲဘဲဖြစ်နေပါတယ်… အခုလည်း မြို့နယ်ရဲစခန်းနဲ့ပြီးရမဲ့ဟာ ကာလုံအထိ ရောက်စရာ မလိုပါဘူး…
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် မှန်ကန်တဲ့ လုပ်ရပ်အတွက် ကာလုံရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အသိအမှတ်ပြု လေးစားပါတယ်….
သူများနိုင်ငံလာပြီး အ၀ှါ လာယားနေတာ..
အေဘေးကြီး လူဝါးဝလို့ သူကတောင် တရားပြန်ဆွဲချင်သေးဆိုပဲ
ကောင်းတယ်..အဲဒီ ငလမသ ကြီးကို နှင်ထုတ်လိုက်တာ…
နဲတောင် နဲသေးတယ် …
မြန်မာ့ဂုဏ်သိက္ခာ နဲနဲ ပြန်တက်လာပြီထင်ပါရဲ့ ..
အရင်လို ဟိုလူ့မျက်နှာချိုသွေး ၊ ဒီလူ့မျက်နှာချိုသွေး အဖြစ်မျိုးတွေ မရှိပါရစေနဲ့တော့ …
မိစိန်ပေါက်..မဆဲနဲ့ ဟဲ့ ဖသမရဲ့..ဟင်းပြောရင်းနဲ့ များစိတ်တိုသွားလို့နော်..
ဟို ခသတစ ဂျပန်တော့ ပါးပါတစ်ချက်လောက်ပြန်ဆော်ပေးလိုက်ရမှာ…
ကောင်းသောသတင်းပါ။ ဒီအကောင်ဘာကောင်လဲတော့မသိဘူး ၊ဖြစ်သင့်တာတော့ဒီနိုင့်ငံရဲ့တည်ဆဲဥပဒေအရပါအရေးယူသင့်တာ။
I’m very respect to this kind of judgment.
ဒါမျိုး၊ ဓါတ်ပုံ ပါရှာပြီးတင်ရမှာ။ ခင်ရာမင်ရာ ဂျပန်ကလူတွေဆီပို့ပြီး၊ ဟိုမှာပါဆက်ပြီးအရှက်ခွဲရမှာ။
ဒါနဲ့ ဟိုအမဲ မ နှစ်ကောင်ကောဘာလုပ်လိုက်လဲ၊ သိရင်ပြောကြပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်ကန်မျှတတဲ့ တရားဥပဒေ အတိုင်းဆောင်ရွက်တာ အကောင်းဆုံးပါ။ ပြည်နှင်ဒဏ်အပြင်ဒဏ်ငွေပါ ဆောင်စေသင့်တယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါဟာ နာကျင်စေမှုပုဒ်မနဲ့ အကျူးံဝင်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဟိုတယ်မှာတည်းပြီး ဟော်တယ်စည်ကမ်းကို မလိုက်နာတာကတချက် တချက်ပါ။ အပြစ်ပေး တာ မတရားပြင်းထန်သွားရင်လည်းခရီးသွားလုပ်ငန်းကို ထိခိုက်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဥာဏ်ပညာ အတွေ့အကြုံဗဟုသုတနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုရင်ကော ဒါမျိုးပြစ်မှုတွေပေါ်လာရင် ဘယ်လို အရေးယူမှုတွေ ပြုလုပ်မယ်ဆိုတာတော့ သိချင်နေမိတယ်။
ရန်ကုန် ဂျပန်သံရုံးကို အီးမေးပို့ပြီး ကန့်ကွက်ကြမယ်ဆိုရင်…..
အောက်ကဂျပန်သံရုံးရဲ့ Email လိပ်စာတွေပါ..
ထိုင်းမှာ ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ အခြေချလာတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကို တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေက ဆန္ဒပြကြပါတယ်… ဂျပန်တွေ ၀င်မလာစေချင်တဲ့ သဘောပေါ့… အကြောင်းက ဂျပန်တွေက သူတို့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ ၀န်ထမ်းတွေကို ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုအတိုင်း လိုက်နာစေလိုကြပါတယ်… ဂျပန်တွေ နားမလည်တာက သူတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတချို့ကို ကမ္ဘာ့ဘယ်နိုင်ငံကမှ လက်မခံကြဘူး ဆိုတာကိုပါပဲ… ဥပမာ ပါးရိုက်တာ၊ လိင်ဆန္ဒပြင်းပြလွန်းတာ၊ အလုပ်သမားကို လက်မခံနိုင်လောက်အောင် ကျိုးနွံစေချင်တာမျိုးကို ဘယ်သူကမှ လက်မခံကြပါဘူး… အဲဒီကိစ္စတွေ ဖြစ်တော့ ဒီကိစ္စကို လေ့လာ ဖြေရှင်းဖို့ ဂျပန်က ပညာရှင် ခပ်ကြီးကြီးတစ်ယောက်ကို လွှတ်လိုက်ပါတယ်…
ဒီအဖြစ်အပျက်က ဘာကိုပြလဲဆိုတော့ ဂျပန်တွေနဲ့ ဆက်ဆံချင်ရင် သူတို့ရိုင်းတာကို လက်မခံဘဲ မကြိုက်တာကို မကြိုက်ကြောင်းပြမှ သူတို့က ကိုယ့်ကို အလေးထားတယ် ဆိုတာကိုပါပဲ… မကြာခင် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံကို ဂျပန်တွေ ၀င်လာတော့မှာပါ… ကျွန်တော်တို့ဖက်က ကိုယ့်မျှော်လင့်ချက်ကို ကိုယ်သိထားမှ သူတို့နဲ့ ဆက်ဆ့တဲ့အခါ အဆင်သင့်ဖြစ်နေမှာလို့ ထင်ပါတယ်…
အဲဒီလို ကောင်မျိုး နောင်အခါ ကျုပ်တို့ မြန်မာပြည်ကို မလာစေနဲ့ … ။
ဘယ်နှယ့်ဗျာ … မြန်မာပြည်လည်း လာသေး။ မြန်မာမလေးကိုလည်း ပါးချသေးဆိုတော့ တော်တော်ကို ရိုင်းစိုင်းတဲ့ အကောင်ပါ။ သဂျီးက မဆဲရဘူးဆိုလို့။ နို့မဟုတ်လို့ကတော့ မိုးမွန်နေအောင်ကို ဆဲပစ်လိုက်ချင်တာ။
စီရင်ချက်ချတာကောင်းပါတယ်။ဒါပေမယ့် မြန်မာစစ်သားတွေ သတင်းထောက်နာဂအိစံကို ပစ်သတ်ထားတာ၊
ဂျပန်မိန်းကလေးကို မုဒိမ်းကျင့်သတ်ပစ်တာတွေကို မေ့မထားကြပါနဲ့ ။
ဒါပေမယ့် မြန်မာစစ်သားတွေ သတင်းထောက်နာဂအိစံကို ပစ်သတ်ထားတာ၊
ဒါပေမဲ့အရင်တုန်းက ဂျပန်ခေတ်တုန်းကရိုင်းခဲ့တာတွေကိုမကြေနိုင်သေးပါဘူး။ ကျွန်မတို့မြန်မာတွေကသဘောထားကြီးစွာ၊လူမျိုးကြီးပီသစွာခွင့်လွှတ်ခဲ့ကြတာပါ။
ဟုတ်ပါတယ် မသဲနုအေးရေ။အမှန်ကတော့ လူသားခြင်းစာနာထောက်ထားကြဖို့ 
သူများပါးရိုက်ခံရတာကို ပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်ရုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။
နစ်နာကြေး ထိုက်ထိုက်တန်တန် တောင်းရမှပါ။
(စကားချပ်၊ ၊ဂျပန်သတင်းထောက်ကို ပစ်သတ်လိုက်တာ၊ ဂျပန်မကို စော်ကားသတ်ဖြတ်လိုက်တာ တွေက အားနာစရာဖြစ်နေလို့ ဒီလောက်ပဲ လုပ်လိုက်တာလား??????)
တရားဝင် တောင်းပန်ခိုင်းသင့်တာ၊ ဒါမှမဟုတ် နစ်နာကြေး ပက်ပက်စက်စက် တောင်းပစ်ရမှပါ။
ကောင်းတယ် ……အပြစ်ပေးတာ ထောက်ခံတယ်။…ဒါနဲ့
Actually, If the country is weak or poor, all are look down.
So please let us do for our country something ( For example: social affair ).
ကျုပ်ကတော့ အားရသဗျာ ၊ ပြည်နှင်ဒဏ်နဲ့ ငွေဒဏ် ၂ မျုိးစလုံးကျခံသင့်တယ် ၊
အပြစ်ဒဏ်က နဲလွန်းနေသလားလို့ ။
ပြည်သူဘက်က အရေးယူပေးတာ ထင်ထင်ရှားရှား ရှိလာပြီဆိုတော့.. နောင်များ ခရီးသွား လမ်းပွင့်လို့ လာတဲ့သူတွေ များလာရင် ဒီလို အဖြစ်တွေ ရှိအုန်းမှာပဲ.. နမူနာ တယောက် ရှိဖူးတော့.. ရဲစခန်းက ကူညီ ဖြေရှင်းပေးရဲလောက်ပါပြီလို့ ယူဆပါတယ်။
ကောင်းတဲ့ ဘက်က အမြင်ပေါ့လေ.. ပြည်သူတွေ အတွက် ပြည်သူ့ရဲ ဆိုတာ အားကိုးရာ ဆိုတော့.. သူတို့ ကလည်း လုပ်ရဲ ကိုင်ရဲမှ ဖြစ်မှာ.. အခု ကိစ္စ နမူနာယူပြီး ကာကွယ်ပေးရဲပါစေလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံးကတော့ တခုခု မကျေနပ်ရင် ညီညီညာညာ ဖွ နိုင်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။
မြန်မာတွေ မျက်စိကြီး နားကြီးနိုင်ဖို့ သိတဲ့လူ တတ်တဲ့လူက ရိုင်းပင်းပေးဖို့တော့ တကယ်လိုအပ်တာ ဒါ တကယ့် နမူနာပဲ။
ထိခိုက်နာကျင်စေမှု ကာအိနြေ္ဒပျက်ပြားအောင်လုပ်မှု စတဲ့အမှုပေါင်းစုံတပ်လာမှာပါ
soe thura says: